Kemeron Dias - एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री, संसारको 1994 मा जारी भएको थियो जुन फिल्म प्रोजेक्ट "मुकुण्डो" मार्फत सिकेका छ जो को अस्तित्व। वर्षौंदेखि गोरा स्ट्राइकिङ्, छैन केवल protagonist को निकट लाइन प्रेमिका को फ्याँकिन्, तर पनि वास्तविक हलिउड स्टार भएको छ। को रोचक तथ्य उनको व्यक्तिगत जीवन र क्यारियर बारेमा परिचित छन् के हुन्?
Kemeron Dias: जीवनी टिप्पणी
अभिनेत्री, प्रेस सधैंभरि "हलिउड केटी" स्वराङ्कित जो, 1972 मा सान डिएगो जन्म भएको थियो। Kemeron Dias वर्तमान ब्रिटिश, जर्मन र पनि Mexicans पुर्खाहरूको बीचमा। को गोरा त्यो जीवन भर किनभने वर्ण को समानता को अनुकूल छ जसलाई एउटा दिदी, छ।
को स्वर्गदूतीय उपस्थिति भए तापनि एक प्रारम्भिक उमेर देखि एक केटी एक बदमास बच्चा, लगातार छिमेकी बच्चाहरु संग लडे थियो। संग उमेर, Kemeron Dias को वर्ण वस्तुतः अपरिवर्तित। एक किशोरी बन्ने, त्यो आमाबाबुले चासो लागि कारण प्रदान भएनन् गरेको छैन। तारा चीयरलीडर शंकास्पद परिचितहरू, एक सांगीतिक निर्देशन, धातु रूपमा उपयुक्त र आफ्नो स्वतन्त्रता आक्रमण सहनु छैन। तर, आमा आफ्नो मनपर्ने संगीत को विकल्प मा छोरी प्रतिबन्ध छैन, यो अक्सर संगीत Ozzi Osborna लागि अभियान मा उनको कम्पनी राखिएको थियो।
यो एक अभिनेत्री को योजना एक सानो Kemeron Dias समावेश थिएन बन्न कि रोचक छ। उनको सबैभन्दा कुकुर मात्र होइन र बिरालोहरु, तर पनि साँप संग माउस Inhabited छ जो एक मिनी-चिडियाघर, हुन सक्छ गृह द्वारा प्रमाणित, जनावर विश्व आकर्षित। तर, गोरा देखि एक zoologist काम गरेन।
गल्ति एक पार्टी मा उनको भेट, गगन सुझाव एक मोडेल रूपमा फोटोग्राफर एजेन्सी "अभिजात वर्ग" आफ्नो हात प्रयास गर्नुहोस्। पहिले नै 16 वर्ष "प्यारा" मेरो जीवनमा पहिलो सम्झौता हस्ताक्षर र विज्ञापनहरु सिर्जना संलग्न भए। उनको दैनिक कमाइ2हजार डलर सम्म पुग्न सकेन।
Kemeron Dias संग सिनेमा प्रशंसक अब भाग्य को इच्छा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। "मास्क" को लागि स्क्रिप्ट गल्ति उनको आँखा समातिए, तर यति त्यो कास्टिंग जाने निर्णय गर्ने केटी captivated। दावेदार अभिनय को अनुभव कमी, हास्य निर्माताहरू भ्रमित छैन यसको बाह्य डाटा गोरो धन्यवाद प्रसिद्ध प्रेमिका Dzhima Kerri बन्ने, को भूमिका जित्यो। फिल्म पछि 22 वर्षीया Diaz शाब्दिक प्रसिद्ध उठेँ।
सर्वश्रेष्ठ चलचित्र भूमिकाको
यो भाग लिए जो, क्यामरून, सुटिङ मा तस्वीर सबैभन्दा सफल चयन गर्न गाह्रो छ। रोमांटिक कमेडी मा "सर्वश्रेष्ठ साथी विवाह," त्यो नाजुक केटी, मायावी प्रेम लागि लड्न तयार प्ले। को "चार्ली स्वर्गदूतहरूको" Diaz एक सुन्दर र आत्म-विश्वस्त जवान महिला, सुपर एजेन्ट, धाराप्रवाह नवीन हतियार र निसस्त्र लडाई मा रूपान्तरणहरूलाई।
भूमिकाबारे उन्मुक्ति "cuties" अभिनेत्री रोमाञ्चक यो एक त्यागेर दुलही वर्ण Toma Kruza रूपमा कार्य जो "भेनिला आकाश", मदत गरे। यो frivolous छलफल गर्न सकिन्छ र Kemeron Dias को हेरोइन रूपमा "को न्यूयोर्क गिरोह" यसको भूमिका warring गिरोह को संघर्ष को epicenter छ।
एक खुसी अन्त संग रोमान्टिक कमेडी प्रेम गर्ने दर्शकहरु, प्रेम गर्नेछ मुख्य भूमिकाको को एक अमेरिकी तारा द्वारा प्ले जसमा "छुट्टी"। यो हेरोइन Diaz प्रतीक्षा बाध्य जो छैन ताजा छाप, को खातिर साथीसँग घरहरू परिवर्तन। को सुधार खराब मुड जो एक गोरा सेक्स शिकारी-धनी पति रूपमा कार्य गर्ने कमेडी "खराब शिक्षक," मदत गर्नेछ।
स्वास्थ्य र सौन्दर्य तारा रहस्य मा रुचि धेरै वर्ष को लागि पत्रकार र प्रशंसक। Kemeron Dias पुस्तक, आफ्नो संलग्नता संग लिखित, यस्ता प्रश्नहरू गर्न विस्तृत उत्तर।
अभिनेत्री उनको admirers गरे भनेर एक आश्चर्य बनेको साहित्य, उचित पोषण मा सामान्य सिफारिसहरू प्रदान गर्दैन। यो पाठकहरूलाई केक को एक टुक्रा हुन्छ के थाहा चाहने रोचक हुनेछ, तिनीहरू खाने अनुमति दिन्छ। "Cuddles" यो उनको "निकायको पुस्तक" मान्छे स्वस्थ बानी प्राप्त गर्न मदत गर्नेछ थियो विश्वस्त छ।
यो Kemeron Dias जवान मायालु केटी थियो कि कुनै गोप्य छ। त्यो यस्तो मत्ती डिललोन, Dzhared Leto, Dzhastin Timberleyk, Aleks Rodriges रूपमा तारा भेटे। हाल अभिनेत्री पतिको एउटा सुखी परिवार जीवन धन्यवाद फेला छ Benji Madden। पति गगन छोराछोरीलाई अझै एक जोडी छ, एक अभिनेता पनि छ।
Reyzen मार्क - एक महान र अविस्मरणीय
मिखाइल Botvinnik: जीवनी, उपलब्धिहरू, फोटो
Dzhessika Lanzh: जीवनी र क्यारियर
सामान्य Sergeyev: जीवनी र फोटो
Mahlay Sergey Vladimirovich: जीवनी, क्रियाकलाप, उपलब्धिहरू र रोचक तथ्य
लिडियाले Andreevna Ruslanova: जीवनी, जीवन, रचनात्मकता र सबै भन्दा राम्रो गीतहरू को इतिहास
रातो स्कर्ट सधैं वर्तमान छ!
एम-ब्यान्ड: समूह Konstantin Meladze
तपाईं बरफ माछा मार्ने लागि के चाहिन्छ? जाडो माछा मार्ने लागि के सामान आवश्यक छ?
Serenity Makadi बीच Hurghada5* (मिश्र / Makadi) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
कम्प्युटर को सामान्य कार्यका लागि राम कति आवश्यक छ?
"Kandiderm" (क्रीम): मूल्य, प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
पीठो पैसाबारे: वर्णन, वासस्थानमा, लेनदेन को तरिका
बरामदा एउटा सानो घर मा - ग्लाजिंग यो Sunrooms मास्को
एक कुर्सी मा मालिश केप: समीक्षा र विवरण। केप मालिश कार: यो आवश्यक छ कि छैन भनेर?
व्हीलचेयर Bumbleride इन्डी ट्विन: ग्राहक समीक्षा
कसरी पातलो कपाल गर्न मात्रा दिन। सैलुन, पातलो कपाल गर्न मात्रा भन्छन्